Material Shell - GNOME Shell ၏ထိပ်ပိုင်းရှိခေတ်မီ desktop interface တစ်ခု Linux မှ
Material Shell - GNOME Shell ၏ထိပ်ဘက်ရှိခေတ်မီ desktop interface တစ်ခု
မသာ Desktop Environments (DE) y Window မန်နေဂျာများ (WM) လူပုဂ္ဂိုလ်နှင့်စိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ရန်စိတ်ထက်သန်သူများအားကျွန်ုပ်တို့“ အသက်ရှင်သည်” (ပျော်မွေ့) သည် ဂရပ်ဖစ်အသုံးပြုသူမျက်နှာပြင်များ (GUI) အခမဲ့နှင့်ပွင့်လင်းသော Operating Systems များ၏ GNU / Linux များ။ ကတည်းကအကြိမ်ပေါင်းများစွာကျွန်တော်ကဲ့သို့ရွေးချယ်စရာရှိသည် ခေါင်းစဉ်များ (အကြောင်းအရာများ) သို့မဟုတ်အရေခွံများ (အရေခွံများ) ကိုယ်ပိုင်သို့မဟုတ်အခြားသူများ, ဒါမှမဟုတ် add-ons များ (plugins) သို့မဟုတ် extension များ အဲဒါကငါတို့ Linux ရဲ့အမြင်အာရုံကိုအနည်းငယ်ဒါမှမဟုတ်အခြေခံကျကျပြောင်းလဲစေတယ်။
extension ကို၏အမှုဖြစ်သကဲ့သို့ကိုခေါ် ပစ္စည်း Shell, အပေါ်ရရှိနိုင်ပါသည် GNOME Shell က, တစ် ဦး ကိုပူဇော်သက္ကာဘို့နိုင်စွမ်းသော Linux အတွက်ခေတ်မီ desktop interface.
ပစ္စည်း Shell ယင်း၏အဆိုအရအတော်လေးမကြာသေးမီကဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု, ဖြစ်ပါတယ် GitHub တွင်တရားဝင်ဆိုဒ် သူကိုယ်တိုင်သည်သူ၏ပထမဆုံးရရှိနိုင်သောဖြန့်ချိမှုကိုနာမည်အောက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည် 1 ဗားရှင်းရက်စွဲပါ မတ်လ 10, 2020နှင့်၎င်း၏အမည်အောက်၌၎င်း၏နောက်ဆုံးပေါ်ရရှိနိုင်ပါကဖြန့်ချိ7ဗားရှင်းရက်စွဲပါ သြဂုတ်လ 15 ၏ 2020.
ထို့အပြင်၎င်း၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုခေါ်နောက်ထပ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအပေါ်အခြေခံသည် အံ့သြဖွယ်ပစ္စည်း။ နှစ်ခုလုံးကိုခေါ်သုံးစွဲသူမှဖန်တီးထိန်းသိမ်းထားသည် နေပြည်တော်.
1 Material Shell: GNOME Shell အတွက်ကောင်းမွန်သော extension တစ်ခုဖြစ်သည်
1.1 ပစ္စည်း Shell ဆိုတာဘာလဲ။
1.2 Material Shell ကဘာကိုကမ်းလှမ်းပါသလဲ
1.2.1 အသစ် Spatial မော်ဒယ်
1.2.2 အသစ်သောဂရပ်ဖစ် interface ကို
1.2.3 တစ် ဦး က tiling ကဲ့သို့ပြတင်းပေါက်စီမံခန့်ခွဲမှုအင်ဂျင်
Material Shell: GNOME Shell အတွက်ကောင်းမွန်သော extension တစ်ခုဖြစ်သည်
ပစ္စည်း Shell ဆိုတာဘာလဲ။
သူ၏ကိုးကား တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက် အင်တာနက်ပေါ်တွင်၎င်းကိုဖော်ပြထားသည် -
"GNOME Shell အတွက် extension တစ်ခုအဖြစ်ထုပ်ပိုးထားသော Linux အတွက်ခေတ်မီ desktop interface တစ်ခု။ သင်၏အသုံးပြုသူအတွေ့အကြုံကိုမြှင့် တင်၍ ရိုးရာစားပွဲတင်ကွန်ပျူတာများ၏လုပ်ငန်းအသွားအလာမင်းမဲ့စရိုက်ကိုဖယ်ရှားပါ။ navigation ကိုလွယ်ကူစေရန်နှင့်ထုတ်လုပ်မှုတိုးတက်စေရန် windows ကို manipulate လုပ်ရန်လိုအပ်ခြင်းကိုလျှော့ချရန်ရည်ရွယ်သည်။ ဒါဟာ 100% ကြိုတင်ခန့်မှန်းဖြစ်နှင့်ကမ္ဘာပေါ်မှာပညာရှင်များကလိုချင် tools များ၏အကျိုးကျေးဇူးများကိုရောက်စေဖို့ရည်ရွယ်သည်။".
Material Shell ကဘာကိုကမ်းလှမ်းပါသလဲ
အတွက်ဖြေရှင်းတဲ့အခါ GNOME Shell မှ Shell ပစ္စည်း အသုံးပြုသူများသည်အောက်ပါခံစားနိုင်ပါတယ် အင်္ဂါရပ်များနှင့်လုပ်ဆောင်ချက်များကို ထည့်သွင်းထားသည်
အသစ် Spatial မော်ဒယ်
၎င်းသည်သင်သွားလာရန်ခွင့်ပြုသည် ဂရပ်ဖစ်ပတ်ဝန်းကျင် ပိုပြီးလုပ်ခြင်းဖြင့် ဖော်ရွေခြင်းနှင့်ကြိုတင်ခန့်မှန်း။ ကတည်းကကပါဝင်သည် ပိုပြီး optimized Workspace ကို application အမြောက်အများကိုတစ်ပြိုင်နက်တည်းဆန့်ကျင်ပြီး၎င်းတို့အကြားလွယ်ကူစွာပြောင်းရွှေ့ရန်။
ဒါကတစ်ခုချင်းစီကိုဆိုတဲ့အချက်ကိုမှကျေးဇူးတင်ပါတယ် Workspace အများအပြား applications များနှင့်အတူတစ်တန်းအဖြစ်ပြသနေသည်။ လျှောက်လွှာအသစ်ဖွင့်သောအခါ၊ ၎င်းသည်လက်ရှိအလုပ်နေရာ၏အဆုံးတွင်အလိုအလျောက်နေရာချလိမ့်မည်။ အလုပ်အသစ်တစ်ခုကိုထပ်ထည့်သောအခါ၎င်းသည်အောက်တွင်အလိုအလျောက်ထည့်သွင်းပေးပြီး၊ အကောင်းဆုံးလုပ်ဆောင်နိုင်သမျှအကောင်းဆုံးကိုဖော်ထုတ်သည်။
ဤအင်္ဂါရပ်သည်ကျွန်ုပ်တို့အတွက်ပြတင်းပေါက်များကိုအလိုအလျောက်စီခြင်းဖြင့်ရိုးရှင်း။ ၊ သူ တစ်ဇယားကွက်၏ Spatial မော်ဒယ် ကမ်းလှမ်းသည် ထိုးထွင်းသိမြင်မှုအညွှန်း နှင့် applications များနှင့်အတူအပြန်အလှန်လွယ်ကူချောမွေ့။ ထို့အပြင်၏အသုံးပြုမှုကို ကီးဘုတ်ဖြတ်လမ်းများ Workspace များအကြားရွေ့လျားခြင်းနှင့်ဘယ်မှညာသို့ပြတင်းပေါက်များအကြားရွေ့လျားခြင်းတို့အတွက်အလွန်လွယ်ကူမြန်ဆန်စေသည်။
အသစ်သောဂရပ်ဖစ် interface ကို
၎င်းသည်အရာဝတ္ထုမည်သည့်နေရာတွင်ရှိကြောင်းခြုံငုံသုံးသပ်နိုင်ရန်နှင့်ရှာဖွေရေးအတွက်ခွင့်ပြုရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည် Desktop Environment (DE), mouse ကိုနှင့် touch screen ပေါ်မှာနှစ် ဦး စလုံး။ ၎င်း၏ဒီဇိုင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ၎င်းကိုအပိုင်းနှစ်ပိုင်းသို့မဟုတ်ပြားများခွဲထားသည်။
El ဘယ်ဘက် panel ကို စဉ်နှင့်စနစ်နှင့်သက်ဆိုင်သောအရာအားလုံး (ဖွင့်လှစ်သောနေရာများ၊ လက်ရှိစနစ်အခြေအနေ၊ အသိပေးချက်များ) ကိုစီမံသည် ညာဘက် panel ကို အသုံးပြုသော Workspace ကိုစီမံသည် (Workspace row အတွင်းရှိ windows များ၊ layout switch နှင့် windows ကိုယ်တိုင်) ။ ၎င်းတွင်အရေးကြီးသောအစိတ်အပိုင်းနှစ်ခုထွက်ပေါ်လာသည် system panel ကို (ဘယ်) နှင့် Workspace panel (ထ) ။
၎င်း၏အမြင်အာရုံဒီဇိုင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ၎င်းသည်လမ်းညွှန်ချက်အတိုင်းလိုက်နာသည် စတိုင်လ်ပစ္စည်းဒီဇိုင်း, တစ် ဦး ကိုထောက်ပံ့ဖို့ခွင့်ပြုမယ့်ခိုင်မာသောအခြေခံအုတ်မြစ်ကိုထောက်ပံ့ပေးသော ဗေဒနှင့်အလွန်အမင်းသုံးစွဲနိုင် interface ကို။ ထို့အပြင်၎င်းတွင်ရရှိနိုင်သည့်အခင်းအကျင်းသုံးခုပါဝင်သည်။ အမှောင်၊ အလင်းနှင့်မူလတန်း။ နောက်တစ်ခုကကျွန်ုပ်တို့ရွေးချယ်တဲ့အရောင်ကိုသုံးဖို့ခွင့်ပြုပါတယ်။ ၎င်းသည်ပိုလန်သောဖန်သားပုံသဏ္appearanceာန်ကိုလိုချင်သူများအတွက် interface ကိုမှုန်ဝါးစေနိုင်သည်။
တစ် ဦး က tiling ကဲ့သို့ပြတင်းပေါက်စီမံခန့်ခွဲမှုအင်ဂျင်
၎င်းသည်သင်တို့၏ပြတင်းပေါက်များကိုသူတို့နှင့်ထပ်တူမကျသည့်ကြိုတင်ခန့်မှန်းနိုင်သည့်နည်းလမ်းဖြင့်စုစည်းရန်ခွင့်ပြုသည်၊ ၎င်းသည် ၀ င်းဒိုးစီမံခန့်ခွဲမှု၏ရှုပ်ထွေးမှုကိုဖယ်ရှားပေးသည်။ ထို့ကြောင့်, ပစ္စည်း Shell ၏ပြတင်းပေါက်ကြည့်ရှုရန်ကွဲပြားခြားနားသောနည်းလမ်းများခွင့်ပြုပါတယ် ကြွေပြားပုံစံ။ အောက်ပါတို့မှာ -
Maximized: Workspace တစ်ခုလုံးကိုသိမ်းပိုက်သောတစ်ခုတည်းပြတင်းပေါက်။
Divide: Workspace တစ်ဝက်စီကိုတစ်နေရာမှတစ်နေရာမှာပြတင်းပေါက်နှစ်ခု။
Columnar - ပြတင်းပေါက်များအားလုံးကိုကော်လံများအဖြစ်ပြသသည်။ (Ultra-wide monitor အတွက်အသုံးဝင်သည်)
အလယ်အလယ် - ဘယ်ဘက်ရှိ ၀ င်းဒိုးနှင့်ညာဘက်တွင်ရှိသောအခြားပြတင်းပေါက်များ။
Grid တွင် - ပြတင်းပေါက်များအားလုံးကိုဇယားကွက်တစ်ခုအဖြစ်ပြသသည်။
Material Shell ကကမ်းလှမ်းသည် ဇှဲကောငျးခွငျးဆိုလိုသည်မှာ window ဖွင့်ရာနေရာများကိုမှတ်မိပြီးသို့မဟုတ်စိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်နိုင်သည်။ နှင့်အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့အစုံ ကီးဘုတ်ဖြတ်လမ်းများ အလွယ်တကူစီမံခန့်ခွဲရန်, မောက်၏အသုံးပြုမှုကိုရှောင်ရှားရန်။
ပိုမိုလေ့လာရန် ပစ္စည်း Shell အပေါ်ကရှင်းပြထားတဲ့အရာအားလုံးဘယ်လိုပုံလဲဆိုတာကိုအပြည့်အဝနားလည်ပါ၊ အောက်ပါတို့ကိုသွားပါ တရားဝင် link ကို en GNOME Extensionsနှင့်၎င်းကိုသင်၏တရားဝင် YouTube ဗွီဒီယိုများမှတစ်ဆင့်ကြည့်ရှုရန်မကြိုးစားမီကြည့်ပါ တပ်ဆင်မှုလုပ်ငန်းစဉ်.
ငါတို့မျှော်လင့်ပါတယ် "အကူအညီအနည်းငယ်သာပို့စ်" GNOME Shell ရဲ့အံ့သြဖွယ်ကောင်းတဲ့ extension ကိုခေါ်ပါတယ် «Material Desing»တစ် ဦး ကိုထောက်ပံ့ပေးသော ခေတ်သစ် desktop interface Linux အတွက်; တစ်ခုလုံးကိုအဘို့ကြီးစွာသောအကျိုးစီးပွားနှင့် utility ကိုဖြစ်ပါတယ် «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» နှင့်၏အံ့သြစရာ, အလွန်ကြီးမားသောနှင့်ကြီးထွားလာ၏ applications များ၏ဂေဟစနစ်၏ပျံ့နှံ့ဖို့ကြီးစွာသောအလှူငွေ၏ «GNU/Linux».
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » အသွင်အပြင် / ကိုယ်ပိုင် » Material Shell - GNOME Shell ၏ထိပ်ဘက်ရှိခေတ်မီ desktop interface တစ်ခု
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်သည်ဤ extension နှင့်၎င်းကိုဖန်တီးသူအားဂုဏ်ပြုပါသည်။ ကျွန်ုပ်၏မှတ်ချက်သည်ဤ blog page.desdelinux.net သို့သွားသည်။ ဤစာမျက်နှာကိုသင်သွားတိုင်း cookie များလက်ခံရန်ကျွန်ုပ်အားတောင်းဆိုသည်၊ တစ်ချိန်ကလက်ခံခဲ့သည်၊ အမှန်တရားအားလုံးနီးပါးတွင်ရှိသည်။ ကျွန်တော့်ဆဲလ်ဖုန်းမျက်နှာပြင်သည်ဆောင်းပါးကိုအလွန်စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေသည်။ ကျေးဇူးပြု၍ မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းများ၊ ကြော်ငြာတွင်အနည်းငယ် ပို၍ တိုင်းတာပါ။ အကြိမ်ပေါင်းများစွာသင်ဤအကြောင်းပြချက်ကြောင့်သင်ထုတ်ဝေသောဆောင်းပါးများကိုမဖတ်တော့ဘဲရပ်နားလိုက်သည် ဒီအသေးစိတ်အချက်အလက်ကိုကျွန်တော်မှတ်ချက်ပေးပါတယ်၊ ခင်ဗျားနားလည်ရမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်
Display Manager: Linux ရှိ Login Managers ဆိုတာဘာလဲ။